I-Apple ikhupha iBeta yesine yeTVOS yaBaphuhlisi | Ndisuka mac
I-Apple ikhupha i-beta yesine ye-tvOS yabaphuhlisi
Kwiphakheji yokuhlaziya eyenziwa yinkampani ngamaxesha athileU-Apple namhlanje ukhuphe i-beta entsha yohlaziyo lwe-tvOS 11.1 oluzayo, ngokukodwa kubaphuhlisi.
Phantsi nje kweveki emva kokuqaliswa kwe-beta yesithathu, Inkampani esekwe eCupertino ngoku isungula i-4, equlethe inani lokhuseleko kunye nokusebenza kophuculo, kunye nokulungiswa kwe-bug encinci. Akubonakali ngathi kukho naziphi na izinto ezintsha ezibandakanyiweyo kule beta 4.
Ngelixa kungekho lutshintsho lukhulu lwangaphandle, uApple uthi, ngokungafaniyo nezinye iibetas ezikhutshwe namhlanje, Uhlaziyo lujongana nokuba sesichengeni kakhulu kwimigangatho yeWPA2 yeWi-Fi ekhusela uninzi lweenethiwekhi zeWi-Fi.
I-beta yesine ka-Apple isungulwe namhlanje, ngaphezulu nje kwenyanga emva kokumiselwa ngokusesikweni kwe-tvOS 11, ngexesha lokwenziwa kwasekuqaleni kukaSeptemba okwenzeka eCalifornia, eUnited States.
I-tvOS 11 yazisa ngeempawu ezinje Inkxaso epheleleyo yee-AirPods, ukutshintshela ngokuzenzekelayo phakathi kwemodi yokukhanya kunye nemnyama esekwe kwixesha lendawo, ukhetho lwesikrini sasekhaya esenzelwe ukugcina iiTV ezininzi zivumelanisiwe, njl.
Njengakwiibhetas zangaphambili, Kubonakala ngathi uhlaziyo lokuqala olukhulu lwenkqubo yokusebenza ye-Apple TV ayizisi ndaba zininzi. Nangona kunjalo, uphuculo olukhulu lulindelwe kuhlobo lokugqibela lwe-Apple lwe-tvOS 11.1.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha i-beta yesine ye-tvOS yabaphuhlisi